Nhau - Ndeipi dhaimondi inodhura kwazvo pasirese? Tarisa uone hupfumi hwakagadzira iyo nhoroondo yemusika
Ndeipi dhayamondi inodhura kwazvo pasi rose? Tarisa uone hupfumi hwakagadzira iyo nhoroondo yemusika
Ndeipi dhayamondi inodhura kwazvo pasirese? Kana zvisingakwanisike kuona kukosha kwayo, pamwe tinogona kuona mutengo wemhete yedhaimondi kuburikidza nedhaimondi inodhura kwazvo uye inodhura kwazvo munhoroondo yefandesi. Izvi zvakagadzira mhete yedhaimani munhoroondo munhoroondo yesendi. Moyo wakanaka uye wakadhakwa!
Madhayamondi mashanu anodhura kwazvo munhoroondo yeimba yekutengesa
Iyi Graff yero mhete yedhaimani, inorema 100.09 carats, pakutanga yanga isingakwanise kuvhara nekuda kwemabhidha mashoma. Gare gare, imba yekutengesa yeSotheby ichizivisa kutengeswa zvakare kwemadhaimani, chiitiko chakakosha zvikuru yaive mutengo wekupedzisira wemadhora zviuru gumi nemazana masere emadhora muna Chivabvu 2014. Chibvumirano, sekutaura kwaSotheby, chakaratidza kuti mutengo wacho watotyora kare nyika rekodhi mamirioni emadhora ekuAmerica, uye imba yekutengesa inotenda kuti mutengo "wakanaka", mushure meizvi, mutengo unofungidzirwa wedhaimani mune 15-20-25 mamirioni emadhora ekuAmerica pakati.
Chitubu cha2017 chakaitwa manheru e4th kuHong Kong Convention uye Exhibition Center. Inotarisirwa kwazvo "Pink Star" - inorema 59.60 carats e ellipse yemukati isina dhayimendi isina pingi madhayamondi angangoita 553 mamirioni eHong Kong madhora. nyika.
Christie akatengesa mangoda ebhuruu anokwana 14.62-carat pamadhora zviuru makumi mashanu nemakumi mashanu nematanhatu kuGeneva, Switzerland. Dhaimondi inopenya yebhuruu yakatorwa nemutengi asingazivikanwe yainzi Oppenheimer Blue. Mutengo pamberi pefandesi uyu waifungidzirwa pamazana matatu nemakumi masere emadhora makumi mana nemashanu emadhora ekuAmerica.
Musi waNovember 12, 2013, dhayamondi rakakura kwazvo reoranjisi pasi rose rakatengeswa nemadhora US $ 31.59 miriyoni, ichitara zvinyorwa zvemutengo wemikoto yemadhaimondi yakafanana. Iyi dhayamondi yeorenji yakayerwa neAmerican Gemological Institute seyakanyanya mhando giredhi uye ruvara rwayo rwakachena orenji. Iyi mhando yedhaimani inonzi zvakare "fire diamond" uye haiwanzo kuoneka pafandesi. Zvinogona kutaurwa kuti dhayamondi yeorenji inozivikanwa Iyo yakakura kwazvo yerudzi rwayo.
Muna Gumiguru 2013, chena elliptical fender-colored Type IIa diamond, inorema 118.28 carats, yakazotengeswa $ 30.6 miriyoni (HK $ 212 miriyoni) ku "Hong Kong Sotheby's Magnificent Jew jewelry and Jade Jew jewelry Auction". Zvinogona kutaurwa kuti zvakagadzira rekodhi rekosheni yenyika yemadhaimani machena, uye yakave zvakare imwe yemadhaimani anodhura uye anorema munhoroondo yemisangano. Iyi 118 carat white diamond yakavezwa kubva pamakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekarati yedhaimani mbishi yakacherwa muSouth Africa muna 2011. Zvinonzi mutengi wedhaimondi iri anokwanisawo kuve nemazita ekupa mazita.
Mapfumbamwe Jewelery Auctions muNhoroondo yeJewelery
Necklace yeMaharani yeBaroda, India
Nguva yekutengesa: 1974
Hakusi kuwedzeredza kutaura kuti ndicho chisikwa chakatanhamara munhoroondo yezvishongo. Matatu gumi nematatu akaumbwa semarari eColombia emeralds ane huremu hwese hwemakumi matatu nemana makarati akamiswa pakati penzvimbo yedhaimani muchimiro cherotus, uye akagadzirwa nemakumi emerald nemadhaimondi. . Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti aya matombo ematombo akatorwa ese kubva korona yeGreat Duke weVadodda. Maharani weBaroda, anozivikanwa seDuchess yeWindsor muIndia, ane shungu yezvishongo. Kune mazana matatu chete zvidimbu zvemunhu zvishongo zvakaunganidzwa. Vamwe vacho vanotodzokera kunguva yaMughal.
Bhurocha reDuchess yeWindsor
Nguva yekutengesa: 1987
Van Cleef & Arpels, nepo tsika-yakagadzirirwa Mukadzi weVirgo muVaronda, India, akashandawo naCartier kugadzirisa akateedzana ezvishongo kuDuchess yeWindsor. Izvi zvinozivikanwawo seakakosha kwazvo muunganidzwa wezana ramakore rechi20. Mushure mekufa kweDuchess yeWindsor, muunganidzwa wake wakatengeswa kupfuura madhora makumi mashanu emadhora. Muna 1940 Cartier akashongedza iyo tsvuku, bhuruu uye green matombo uye citrine nemadhaimani eiri rakajeka flamingo bhurocha. King Edward VIII akapa nerupo mukadzi wake waanoda. Kunyangwe iye aitarisira kubvisa bhurocha mushure mekufa kwemaDuchess, haana kuomerera kuti kwenguva yakareba sei. Uye kukosha kweiyi bhurocha kwakaramba kuchikwira, uye ka7 zvakapetwa zvakapetwa kupfuura zvinotarisirwa mamirioni manomwe emadhora ekuUS!
Iyo Princess Salimah Aga Khan's Necklace
Nguva yekutengesa: 2004
Haisi chete maruva eDuchess ye Windsor ayo anotengeswa nemutengo wepamusoro-soro. Sally CroCKer-Poole paakava muchindakadzi muna 1969, akaunganidza nhevedzano yezvishongo zvemhando yepamusoro. Uye zvishongo izvi zvakatengeswa kunze mushure mekunge arambana muna 1995. Manyepo aya anosanganisira chishongo cheBoucheron, huro dzeVan Cleef & Eble dzekuIndia uye madhaimani akaita sebhuruu akaita semoyo, ayo ese anotengeswa nemitengo yepamusoro, iyo inodhura mitengo yeDuchess yeWindsor. zvishongo auction.
Maria Callas's Necklace
Maria Callas, ane mukurumbira nokuda kwe “Mwarikadzi,” muimbi anokurudzira weopera. Hunhu hwake hwakasimba uye inosiririsa nyaya yerudo ndizvo zvinogara zviri izvo zvekukurukurirana kwevanhu. Ndiye mwarikadzi chaiye, anogara akapfeka maparera nemadhaimani, kwese kwaanoenda kunokwezva vanhu. Maria Callas 'anokosha kwazvo muunganidzwa wezvishongo unosanganisira bhurocha remadhaimani epingi akatengwa muna 1967, akatengeswa kunze muna Mbudzi 2004 mushure mekufa makore mazhinji apfuura. Mutengo wese wekushongedzwa kwemenduru wakasvika pamamiriyoni 1.86 emadhora ekuAmerica.
Iyo Princess Margaret Korona
Nguva yekutengesa: 2006
Yekutengesa zvishongo zvePrincess Margaret haizombokanganwika nyore nyore, kunyanya mushure mezana remakore mushure mekunge zvishongo zvaMambokadzi Victoria zvatengeswa muna 1901. Ehe saizvozvo, mazana mazana masere eumambo Princess Margaret muna 2006 aivewo Tsvaga musika. Princess Margaret anga achigara aine runako uye achikwezva asati afa, saka zvishongo zvakawanda zviri kuwedzera kuitira kuti vawane mukana wekupinda mumhuri yehumambo. Kusanganisira mamwe maheirlooms aFaberge naMambokadzi Mary, uye yakakurumbira Poltimore korona yaaipfeka mumuchato wehumambo wa1960, yakazvarwa kutanga kwa1870, zana ramakore rapfuura.
Elizabeth Taylor's Diamond Ring
Nguva yekutengesa: 2011
Hapana okisheni yezvishongo inogona kufanana naElizabeth Taylor's lineup hwoumbozha. Yake yezvishongo muunganidzwa yakatengeswa kunze mushure mekufamba kutenderera pasirese kwemwedzi. Kana isu tichifunga kuti kutengeswa kwakapfuura kwemamirioni makumi mashanu emadhora ekuAmerica kwave kwakanaka zvakakwana kupfura maoko akaipa, saka hauzive chekushandisa kurondedzera 137.2 miriyoni emadhora ekuUS! Auction jewelry inosanganisira 1968 mutambi Richard Burton (Richard Burton akamupa mhete yedhaimondi, huwandu hwemakarati e33.19. Uye ichi chinongova chikamu chidiki chazvo, pamwe neCartier-yakagadzirirwa pearl ruby ​​Peregrina mhete, Iyo Mike Todd korona, Taj diamond mhete , uye imwe Bulgari tsvuku emerald chishongo chakapihwa naRichard Burton.
Lily Safra's brooch
Nguva yekutengesa: 2012
Muchokwadi, okisheni yezvishongo yaLily Safra yakaitika mumakore achangopfuura. Zvishongo zvake zvaakatengesa zvaisanganisira ruby ​​uye mabrocond diamond akagadzirwa naJAR Paris, achirema angangoita 173.09 carats. Chikamu chakanakisa chemufambisirwo ndechekuti mari yese inopihwa kune rubatsiro, nekuti Lily Safra haasi munhu anozivikanwa chete asiwo mutsigiri. Mushure memichato mina, muunganidzwa wake wezvishongo aive nemambure anokosha mamirioni 1,2 emadhora, izvo zvakamuita mumwe wevanhu vakapfuma kwazvo pasirese.
Mhete naGina Lollobrigida
Nguva yekutengesa: 2013
Gina Lollobrigida haasi iye chete mutambi weItaly. Iye zvakare mutori venhau uye muvezi. Aive zvakare mukurumbira mutambi wemuEurope muma1950s nema1960. Panguva iyoyo, aingova chiratidzo chebonde. Muna Chivabvu 2013, muunganidzwa wake wezvishongo wakashambadzirwa uye wakakonzera kunzwa, kunyanya kune mhete dzaPierre Boucherin Diamond Emerald dzakagadzirwa muna 1964.
Rundarira rwaHelene Rochas
2013 zvirokwazvo inguva yepamusoro yezvishambiso zvezvishongo, uye imwe yeakanyanya kusarudzika ndeyekuunganidza zvishongo zvaRosa, kusanganisira bracelet yegoridhe rese yeNid d'Abeille René Boivin ine tsvuku, nesafiri, uye madhaimani. Neimwe nzira, yakadzorawo nhambwe pakati pevateresi uye nharaunda yepamusoro yeParis uye yakasangana neruzivo diki.
Post nguva: Sep-20-2018